ConvertMore: Ku beddel booqashooyin badan oo shabakadeed Widget-ka dib-u-soo-celinta Taleefanka | Martech Zone
Isniin, Disembar 27, 2021 Isniin, Disembar 27, 2021 Douglas Karr
Markaad aragto falanqaynta boggaaga, hal shay oo aad had iyo jeer raadinayso inaad sameyso ayaa ah inaad kordhiso beddelka booqdayaasha. Nuxurka iyo waayo-aragnimada isticmaale ee weyn ayaa kicin kara ka-qaybgalka goobta, laakiin taasi qasab maaha inay soo xidho farqiga u dhexeeya ka-qaybgalka iyo dhab ahaan beddelka. Marka ay dadku rabaan inay si shaqsi ah kula xiriiraan, ma u suurtagelineysaa?
Waxaan haynaa dhawr macmiil hadda waxaanu hirgalinaynaa widgets jadwalaysan oo otomaatig ah halkaas oo booqdayaashu ay iskood ugu adeegi karaan oo ay balamahooda uga samaysan karaan khadka marka aanay rabin inay isla markiiba qof la hadlaan. Laakiin ka waran haddii ay rabaan inay si degdeg ah kula soo xiriiraan? Marka laga reebo widget-ka wada sheekeysiga, hal ikhtiyaar oo aad rabto inaad tijaabiso waa widget-ka dib-u-wareysiga.
Wax badan ka beddel waxay ku siinaysaa xal fudud abuurista dib u soo yeedhista goobtaada. leh Wax badan ka beddel waxaad abuuri kartaa:
Popup waqtiyeysan - deji popup waqtiyeysan si uu u soo muuqdo ka dib marka isticmaaluhu uu waqti cayiman ku qaatay boggaaga. Waxaad hore u dejin kartaa saacada si aad u qabato macmiilkaaga inta lagu jiro ilbiriqsigooda ugu horreeya goobta, ka hor intaanay mashquulin oo aanay ka tagin goobtaada.
Ka bax Popup - Popup-ka ka bixida wuxuu soo baxaa marka nidaamka dabagalka lahaanshaha ee ConvertMore, uu la socdo jiirka isticmaalayaashaada oo dul heehaabaya badhanka bixitaanka ee boggaaga. Waxaad u dejin kartaa dalab gaar ah macaamiishaada si aad uga dhigto inay beddelaan maskaxdooda oo ay ku soo wacaan intii aad ka tagi lahayd boggaaga.
Button sabeynaya – Badhankani waxa uu dul sabeynayaa qaybta hoose ee aaladaha isticmaalaha marka ay baadhayaan goobtaada. Maaddaama in ka badan 55% weydiimaha khadka tooska ah ay ka yimaaddaan isticmaaleyaasha taleefannada gacanta, tani waxay siinaysaa fursad ay si fudud kuugu soo wacaan inta ay ku jiraan daalacashada boggaaga.
ConvertMore waxay leedahay qiime fidsan halkaas oo aad bixiso kaliya marka la soo waco, widgets-yada si buuxda ayaa loo habeyn karaa astaantaada, waxaadna haysataa dashboard buuxa si aad ula socoto heerarka beddelka wicitaanka.
Wax badan ka baro ConvertMore
Tags: beddelka wacwac dashboardka beddelkawidget-ka dib-u-celintawac-gujibeddelaad badanka bixitaanka ujeedka ka soo baxabixi halkii hogaankawidget-ka dib-u-warcida taleefankasoo shaac baxay